Who were Bengali, so called Rohingya?: အရှေ့နှင့် အနောက် အန္တရာယ် ကွဲပြားပုံ (သို့မဟုတ်) ၀ ဆိုသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ရပ်တည်မှု အခြေအနေ
အရှေ့နှင့် အနောက် အန္တရာယ် ကွဲပြားပုံ (သို့မဟုတ်) ၀ ဆိုသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ရပ်တည်မှု အခြေအနေ
ဘင်္ဂလီတွေဟာ လူနည်းစု ကိုယ်က လူများစုမို့လို့ သူတို့လူနည်းစုကို စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးလို့ ဆိုတာ နည်းလမ်းလွဲနေပါတယ်.... ခြေဆော့ လက်ဆော့ မိန်းမဆိုရင် အပျိုမရှောင် အအိုမရှောင်ငန်းငန်းတက်တဲ့ လူမျိုးကို ကိုယ့်အိမ်ပေါ်ကို ဘယ်သူမှ ခေါ်ထားချင်မှာမဟုတ်ဘူး... မျက်နှာသာပေး ရွှေရေးပန်းကန်တက်တဲ့ လူမျိုးတွေမို့လို့လည်း ကျွန်တော်တို့တွေ မဖြစ်သင့်တာကို တားနေတာပါ... INGO အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ဘင်္ဂလီကုလားတွေကို ရန်ကုန်ကိုခေါ်တော့ ရုံးခန်း အပေါ်ထပ်အထိကို ဖိနပ်စီးပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ တက်သွားတတယ်.. ရှေ့မှာ ဖိနပ်ချွတ် ရှိပီးတော့ အားလုံးက ဖိနပ်ချွတ်ထားတာကို မြင်ရဲ့သားနဲ့တောင် ဂရုစိုက်စရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ လုပ်သွားခဲ့တာကို ခံပြင်းခဲ့ရတယ်...
တရုတ်တွေဝင်လာတာလည်း စိုးရိမ်စရာပဲ... ဒါပေမဲ့ တရုတ်မကိုသဘောတူရင် ယူလို့ရတယ်.... အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလီတွေကို ယူမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး... ကြိုက်မိတဲ့ ကိုယ့်လူမျိုး၊ ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေး အသက်အန္တရာယ်တောင် ချိမ်းခြောက်တဲ့အမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ အခြေအနေ ပုံစံခြင်းမတူပါဘူး... သူတို့ဟာ ဒုက္ခသည်တွေဆိုရင် သူတို့နဲ့ ဘာသာတူတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေ ဘာ့ကြောင့် သူတို့နိုင်ငံတွေကို အခု အမေရိကန် Green Card ပေးသလို မခေါ်သလဲ... သိတ်များများ မခေါ်ပါနဲ့ တစ်နှစ်ကို ငါးသောင်းပဲ ခေါ်ပါ ဆယ်စုနှစ်မှာ မြန်မာပြည်မှာ ဒီပြဿနာရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး.. (သူတို့စီ ရောက်သွားတာလည်း ပါမှာပါပဲ....) မခေါ်နိုင်ဘူးလို့ မထင်နဲ့နော် အခုလက်ရှိကို ဟာဂျီရာသီရောက်တိုင်း ပြည်တွင်းမှာ နဂိုရှိပီးသား မြန်မာမွတ်စလင်တွေတောင် မရတဲ့ စပွန်ဆာတွေနဲ့ လေယာဉ်စီးလုံးနီးပါး စီးပီးတော့ မက္ကာကို သွားကြတာနော်.... အဲ့ဒိ ဘူးသီးတောင် မောင်းတောမှာ ဒေသခံ ရခိုင်တွေထက်တောင် အဲ့ဒိ ဘင်္ဂလီတွေက ပိုပြီးတော့ အခွင့်အရေးရကြပါတယ်... UN, INGO တွေရဲ့ အဓိက ဦးစားပေးက ဘင်္ဂလီတွေဖြစ်နေတာကိုး....
၀ ဆိုတာ တရုတ်မဟုတ်တဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုးဆိုတာကို သိစေချင်ပါတယ်.... မရောက်ဘူးသေးတဲ့ ဒေသတွေကို စိတ်မှန်းနဲ့ ရမ်းတုတ်နေကြတာတွေ ပျောက်စေချင်လို့ပါ... ပန်ဆန်းနဲ့ ကြူကုတ် ပန်ဆိုင်းလည်း မတူတာကိုလူတွေ သိတ်မသိဘူး ရောကြိတ်နေတာ များတယ်ဗျ..... ၀ လူမျိုးဆိုတာ တကယ်ရှိပါတယ်.... အခု ဘင်္ဂလီတွေလိုပဲ တရုတ်ပြည်ထဲမှာကော မြန်မာပြည်ထဲမှာပါ ခွနေကြတယ်... ဝ ဆိုတာ မြန်မာတရုတ် နယ်စပ်မျဉ်းကြောင်းပေါ်က တိုင်းရင်းသားပါ .. လားဟူ အခါ နဲ့ ရှမ်းတို့လိုပဲ ဟိုဘက်မှာကော ဒီဘက်မှာပါရှိပါတယ် ... ဗကပကနေခွဲထွက်ပြီး အစိုးရနဲ့ငြမ်းချမ်းရေးယူလာခဲ့တာပါ ... ၀ တွေအပြုတ်တိုက်ခဲ့တာ ကတော့ ဘိန်းဘုရင်ခွန်ဆာအဖွဲ့ကို အသက်ပေါင်းများစွာရင်းပြီး ခက်ခက်ခဲခဲတိုက်ယူခဲ့တာပါ .. (၀ နဲ့ ရှမ်း တွေနဲ့ မတည့်တာတွေ့နိုင်ပါတယ်) တောင်ပိုင်း ဝ နယ်ဆိုတာဟာ ဦးခွန်ဆာရဲ့ ဌာနချူပ် နေရာပါ သူတို့တိုက်ယူခဲ့တာပါ ... (ဖြည့်စွက်ချက် - ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်နဲ့ သဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ပီးတော့ အဲ့ဒိနယ်ကို တိုက်ယူနိုင်ရင် ယူဆိုလို့ ၀ တပ် ၃ တပ် နဲ့ လားဟူ ၂ တပ်ပေါင်းတိုက်ပီး တောင်ပိုင်းနယ်ကို ယူထားတာပါ.. အရင် လေယာဉ်နဲ့တောင် ဗုံးကျဲလို့မရတဲ့ အဲ့ဒိနေရာကို4x4ကားတွေပါ သုံးပြီးတော့ လူ ၂၀၀၀ ကျော် အသေခံတိုက်ပီးယူထားခဲ့တာပါ... ၀ တပ်တွေ တိုက်လို့ ခွန်ဆာအထိနာတော့မှ အစိုးရနဲ့ သဘောတူ လက်နက်ချခဲ့တာပါ....)
ဟိုးအရင်က ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဌာနချုပ် ၀ တွေ အမြှောက်နဲ့ ထုလို့ ကွန်မြူနစ်တွေလည်း တရုတ်ပြည်ပြေးတဲ့သူပြေး သေတဲ့သူသေ... အခုတော့ ၀ တွေရဲ့ အသံလွှင့်ရုံလား တရုတ်ရဲ့ ဖုန်းတာဝါတိုင်လား.. ဘာလဲတော့ မသိဘူး....
သူ့ဟာနဲ့သူနေတယ် သူတို့ဟာသူတို့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကူးလူးသွားနေတယ် ပြဿနာမရှိဘူး... အထူးဒေသ (၂) ရဲ့ ပြဿနာက ငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီးတဲ့အချိန်မှာ ၀ တွေဟာ မိုင်းပေါက်နယ်တစ်ခွင် ပန်ဆန်းနယ်တစ်ခွင်မှာ ရာဘာစိုက်တာ အကြီးအကျယ် အောင်မြင်တယ် အဲ့ဒိကနေ ၀င်ငွေရတယ်... သူတို့ရဲ့ ကတိအတိုင်း ဘိန်းလုံးဝ မစိုက်တော့ပဲ တရားဝင် နည်းလမ်းနဲ့ ၀င်ငွေရှာတယ်.. UNODC အသိအမှတ်မပြုပဲနဲ့ မနေနိုင်အောင်ကို လုပ်တယ်.. ၀ ဒေသမှာ ရွှေတအားထွက်တယ်.. ပန်ဆန်းနဲ့ ၀ စစ်ဌာနချုပ် တောင်သုံးလုံးရှိတဲ့ မိုးမောကိုသွားတဲ့လမ်းမှာကို ထွက်တာ.... တရုတ်ကဒါမျိုးကြတော့ လည်တယ် အကျိုးအမြတ် ကိစ္စနောက်မှ စကားပြောမယ် အရင် ရွှေထုတ်ကြမယ်ဆိုပီးတော့ကို ခောတ်မှီစက်တွေနဲ့ကို တူးနေတာပါ...
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် အထိမ်းသိမ်းခံပြီးသွားတဲ့ အခါမှာ အစိုးရဟာ ၀ တွေအတွက် ၀င်ငွေအများကြီးရှာပေးနေတဲ့ ရွှေဖြူလို့ ခေါ်တဲ့ ရာဘာတောတွေကို လိုချင်စိတ် ပြင်းပြလာတယ်.... ရွှေထွက်တဲ့ တွင်းတွေ၊ သတ္ထုတွင်းတွေ ဒါတွေဟာ အစိုးရအတွက် သွားရည်ကျစရာတွေပါပဲ.... အဲ့ဒိမှာ ၀ တွေရဲ့ အထင်ကရမြို့ဖြစ်တဲ့ မိုင်းပေါက်ကနေ နောက်ဆုတ်ခိုင်းတာမှာ ဒီ ပဠိပက္ခတွေ ဖြစ်လာတာပါပဲ... နောက်တစ်ခုက မိုင်းပေါက်ဟာ ပထ၀ီအနေအထားအရ တော်တော် အရေးပါပါတယ်... မြန်မာ၊ တရုတ်၊ ယိုးဒယား နယ်စပ်နဲ့လည်း တော်တော်နီးပါတယ်... အထူးဒေသ (၄) ကိုးကန့်ခေါင်းဆောင် ဦးစိုင်းလင်းနေတဲ့ မိုင်းလားက အိမ်နဲ့လည်း တအားကြီးမလှန်းပါဘူး.... အစိုးရက ဒါတွေကို သိလို့ နေရာယူချင်တာကို ပါးနပ်တဲ့ ၀ တွေနဲ့ ကိုးကန့်တွေက လက်မခံတာပါ.... (ဦးဖုန်ကြားရှင်တို့ နေတာက သတ်သတ်တစ်နေရာပါ)
2005 ခုနှစ်ကစပြီးလုံးဝဘိန်းမစိုက်တော့ဘူး (သူတို့နယ်ထဲမှာနော်) ဘိန်းတစ်သီးခေါင်းတစ်လုံးအမိန့်ထုတ်ထားတယ် အဲ့အတိုင်းလဲ မိရင်တကယ်သတ်တယ် ... အဲ့မတိုင်ခင်ကတော့ဈေးထဲထိ ဘိန်းပင် ဘိန်းစေ့ ဘိန်းမဲ ပေါ်တင်ရောင်းတယ် .. UNODC နဲသဘောတူညီပြီး အဲ့အတိုင်းလဲဖြစ်အောင်လုပ်တယ် အဲ့တာတော့လေးစားစရာပါ .. လက်ရှိ ရှိသမျှတော အကုန်မီးရှို့ပြီး ရာဘာစိုက်နေတယ် .. ရွှေ ကျောက်မီးသွေးနဲ့ သတ္တု ရိုင်းတွင်းတွေ လက် 10 ချောင်း မကရှိတယ် ... မြေအောက် လှိုင်ခေါင်းထဲအထိ 10 ဘီးကားမောင်းလို့ရတဲ့တွင်း အကြီးကြီးတွေထိရှိတယ် ... လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီးလို့ ငြိမ်းချမ်းပြီး စစ်တိုက်စရာမလိုတော့တဲ့ ဝ တွေအတွက် အဲ့ဒီဝင်ငွေက မြို့ရွာတွေတည်ဆောက်နိုင်တယ်..
နေပြည်တော်လမ်းကမှ ကွန်ကရစ်အဆင့်ပဲရှိတယ် ဝ ပြည်မှာ အဲ့ထက်ထူတဲ့ကွန်ကရစ် ပေါ်မှာ နိုင်လွန်လေးထပ်ထပ် ထားတဲ့ အပျိုစင်စစ် ပါးထက်မုန့်ညက်နေတဲ့လမ်းတွေရှိတယ် (လက်ရှိပင်မလမ်းကြောင်းကြီးကို အဲ့လိုခင်းနေပြီ) နောက်ပြီး လောင်းကစားအလွန်မက်တဲ့ တရုတ် ရှမ်းတရုတ် တို့လိုလူတွေဆီကနေ ငွေသဲ့ယူနေတဲ့ ကာစီနိုဝိုင်းတွေရှိတယ် (တရုတ်ပြည်ကတောင် ကန့်ကွက်ယူရတယ် တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ လာမကစားစေဖို့ ဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲကစားနေတာပဲ) သိမ်ကြီးဈေးနီးနီးလောက်ရှိတဲ့ကာစီနို ရုံနဲ့ကစားကွင်း နိုက်ကလပ်ကိုတွဲထားပေးတယ် ... နိုင်သွားလဲ အဲ့မှာတင်ပဲပြန်ကုန်အောင်စီမံထားပေးတယ် ... အဲ့လိုစည်းပွါးရေးခိုင်နေတဲ့အတွက် တရုတ်ကို ဝ တွေလဲ မြန်မာတွေလိုပဲ မချစ်သော်လဲအောင့်ကာနမ်းနေရခြင်း ဖြစ်တာပါပဲ ... နို့မဟုတ်ရင် ဘယ်မျာသွားရောင်းမလဲ အဲ့သယံဇာတတွေ ... သို့ပေသိ လူမျိုးရေးအရ ဝါးမျိုခံရတာထက်စာရင် တော်ပါသေးတယ် ကိုယ့်လူမျိုးမပျောက်အောင် ထိန်းလို့ရတယ် ...
သမိုင်းကို ပြန်လေ့လာကြည့်ပါ မြန်မာပြည်မှာ ကွန်မြူနစ်တွေ မျိုးပြုတ်ပီး ခြေကုတ်ယူလို့ မရတော့တာ ၀ တွေကြောင့်ပါ.... သူတို့ တောင်သုံးလုံး ဌာနချုပ်ကနေ လှမ်းမြင်နေရတဲ့ မျက်နှာခြင်းဆိုင်က ကွန်မြူနစ် ဌာနချုပ်ကို အမြှောက်နဲ့ထုပီးတော့ စစ်ကြေငြာပီး မောင်းထုတ်ခဲ့တာပါ... ကျွန်တော့ ဓါတ်ပုံ အယ်ဘန်ထဲမှာ ကွန်မြူနစ်တွေ နောက်ဆုံးနေသွားတဲ့ တောင်ပုံ ပါပါတယ်.... ၀ တွေဟာ တကယ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင် အရမ်းကို အသုံးတည့်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိပါတယ် သူဟာလည်း တရုတ်ကို မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်းနေရတာပါ........ သူ့ဟာသူ သီးသန့်နေတတ်တဲ့ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်လိုပဲ အိမ်သားတွေက မယုံသင်္ကာဖြစ်ပီး နှိပ်စက်လွန်းလို့ ဘေးအိမ်ကို အားထားနေရတဲ့ သဘောပါ.... အဲ့ဒါတွေကို သိလို့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်က ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ခဲ့တာပါ.... ဒါပေမဲ့ နဂို ကွန်မြူနစ်တွေကို တိုက်ထုတ်ခဲ့တုန်းက ၀ တွေနဲ့ သတ်ခဲ့တဲ့ မကျေလည်တဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကြောင့် ဒီလို ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာတာပါ....
သေခြာမြင်တတ်ရင် ၀င်လာတဲ့ လူခြင်းတူပေမဲ့ ဓလေ့စရိုက်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်ခြင်း မတူတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတာပါ... သမိုင်းမှာ တရုတ်တွေ မြန်မာရွာတွေကို ရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့သတ်တာတွေ၊ မြန်မာမတွေကို မုဒိန်းကျင့်တာတွေ မရှိခဲ့ပါဘူး.... ဒါနမူနာ ပြောပြတာပါ တရုတ်ကို လက်ခံဖို့မဟုတ်ပါဘူး.... အခု ဒီ ဘင်္ဂလီတွေ လူမျိုးဖြစ်ဖို့အော်နေတယ် သူတို့ တောင်းဆိုချက်တွေက ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေတောင် မရသေးတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို အပြည့်အ၀ တောင်းနေတယ်.. ဘီဘီစီနဲ့ ပေါင်းပြီး မြေပုံအတုနဲ့ သူတို့ဟာ နှစ် ရာချီပီးကတည်းက ရှိခဲ့တာပါလို့ သမိုင်းလိမ်နေတယ်... ရခိုင်တွေကပဲ သူတို့နေရာကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုပီး သူခိုးကနေ လူပြန်ဟစ်နေတာ နေရာသာ ပေးလိုက်ရင်တော့.... ခြေစ လက်စရှိသူကို အိမ်ဝင်းထဲမှာ နေရာပေးလိုက်လို့ ကိုယ့်အမေ၊ နှမကို စော်ကားတာကို ခံရတော့မှ သိလို့ ဖယ်ထုတ်မယ်ဆိုတောင် ကွဲသွားတဲ့ အရှက်တွေ ထိခိုက်သွားတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေဟာ ပြန်လည် ဖာထေးဖို့ ခက်ပါတယ်....
အနောက်ဘက်ကမ်းကနေ စုတ်ပြတ်သတ်ပြီးဝင်လား ကို့မြေမှာခိုကပ်နေ ကို့လူမျိုးတွေဆီကနေ ကပ်ရက်စား သနားတတ်တဲ့မြန်မာတွေကြောင့် အဆင်ပြေလာပြီးရင်မြန်မမတွေယူ ဘာသာရေးအရသွတ်သွင်း .. သူတို့လူမျိုးလုပ် ... ကဲအခုဆို တိုင်းရင်းသား နယ်မြေတစ်ခုအထိ ပါတောင်းလာပြီ ... ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမိတ်ဆွေတို့ ... အရှေ့ နဲ့အနောက် အန္တရာယ်ကွဲပြားပုံကို မရှင်းလင်း သေးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် ရှုထောင့်တစ်ခုအနေနဲ့တင်ပြတာပါ.... လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ လူတိုင်းနဲ့ မတန်ဘူးဆိုတာကို လူ့အခွင့်အရေး အပေးဆုံး နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်တို့ ဗြိတိန်တို့မှာ ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်.......
Source: James MMT
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 7:35 PM
budhist burmese are terrorists and do not deserve democracy. The Buddhism in burma is racist fascism